Soosaarayaasha Haanta Fiberglass - Warshadaha Fiberglass Taangiyada, Shirkadaha Soo Saara
Taangiyada xaydaarka ee Fiberglass waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu hayo heerkul joogto ah oo joogto ah. Qalabka korantadu waa PU, xumbo, iwm. In kasta oo ka-soo-kabashada ka dib, mari fiberlass ama waxyaabo kale oo ku habboon oo daboolaya oo ka ilaaliya daminta.
Cabbirka: DN500mm - DN25000mm ama cabirkiiba macaamilkiiba
Qeybaha qolofka ka sameysan xabaal-furka waxaa lagu soo saaraa warshadaha wax soosaarka waxaana lagu soo koobay ama 'loo xajiyaa' cabirka gaadiid ee wadada la ogolaan karo, oo loo dhiibo barta internetka macaamiisha waxaana lagu ururiyey isku xirnaan. Taangiyada noocan oo kale ah waxaa lagu magacaabaa "haamaha shidaalka"
Taangiyada Fiberglass-ka ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican dhammaan noocyada qalabka cabirka qalabka ka dhigaya mid aan macquul ahayn. Taangiyada waaweyn ee noocan oo kale ah, waxaan guud ahaan u rarnaa qalabka wareegaya dhul-gariirka goobta shaqada, xarkaha wuxuu dabeyshaa qolofka waaweyn ee fiberglass waxaanan ku aruurinaa taangiyada aasaaska ugu dambeeya ama aagga xarun-isku-imaatinka xarun-udheexe.
Cabbirka: DN4500mm - DN25000mm.
Jrain waxay soo saartaa taangiyada muraayadaha indhaha & maraakiibta si ay u buuxiyaan waxkastoo keyd ah.
Taangiyada FRP & maraakiibta waa kuwa khafiif ah, dillaac u adkaysanaya oo muhiimad ahaanna dayactir la'aan ayaa lagu helayaa
Taangiyada Xajmiga Dukaamada iyo Weecadaha waa ilaa 4500mm dhexroor iyo mugga 200m³.
Haamaha waaweyn ee cabirkoodu waa 25000mm dhexroor oo waxaa lagu soo saaray qeybta mashruuca.
Weelasha safarka ee Fiberglass-ka (FRP) waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu badbaadiyo waddo, tareen ama gaadiid biyo xumeyn ah, wasakh ama warbaahin saafi ah.
Taangiyada gaaska qaada ee Fiberglass guud ahaan waa taangiyada safka hore leh oo leh koofiyado. Waxay ka samaysan yihiin resin iyo fiberglass wax soo saarkooda waxaa lagu xakameynayaa kombiyuutar leh habka loo yaqaan 'helix winding winding' ama gacanta loo aasaaso qaabab gaar ah.
Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Caaryada,